Top 5 Sữa tắm Lifebuoy loại nào tốt cho da có mùi thơm nhất | Muasalebang - Muasalebang
Đang Đọc: Top 5 Sữa tắm Lifebuoy loại nào tốt cho da có mùi thơm nhất | Muasalebang in Muasalebang
Ijeli yeshawa ye-Lifebuoy ingumugqa womkhiqizo osekunesikhathi eside ukhona emakethe. Lena ijeli yokugeza ethandwa kakhulu futhi esetshenziswa kakhulu namuhla. Akukhona lokho kuphela, umkhiqizo ubuye uhlolwe ngekhono lawo lokuhlanza ngokuphumelelayo nokuvikela isikhumba. Empeleni Ijeli yeshawa ye-Lifebuoy Ingabe kuhle njengamahemuhemu? Ibiza malini le jeli yeshawa? Thola imininingwane eyengeziwe esihlokweni esingezansi!
1 Mayelana ne-Lifebuoy brand
2 Ingabe ijeli yeshawa ye-Lifebuoy ilungile? Imuphi umphumela?
3 Ingabe ijeli yeshawa ye-Lifebuoy imhlophe?
4 I-Top 5 okuyijeli yeshawa ye-Lifebuoy enephunga elimnandi namuhla
4.1 1. I-Lifebuoy Macha kanye nejeli yeshawa yokususa ubuthi ye-Bitter Melon (850g) yazo zonke izinhlobo zesikhumba
4.2 2. Ijeli yeshawa ye-Lifebuoy isivikelo esivelele 10+ Ama-Silver Ions (abomvu) esikhumba esizwelayo
4.3 3. I-Lifebuoy skin care shower gel 850g (blue blue) yazo zonke izinhlobo zesikhumba
4.4 4. I-Detox Lifebuoy Activated Charcoal & Mint Shower Gel (850g) yazo zonke izinhlobo zesikhumba
4.5 5. Ijeli ye-Lifebuoy Mint Shower (eluhlaza okwesibhakabhaka) yazo zonke izinhlobo zesikhumba
5 Ibiza malini ijeli yeshawa ye-Lifebuoy? Ungathenga kuphi okwangempela?
Mayelana ne-Lifebuoy brand
I-Lifebuoy wumkhiqizo osenesikhathi eside uphethwe ngabakwa-Unilever. Phakathi neminyaka engaphezu kwe-100 yomlando, lolu hlobo luhlala lugcina umbandela ohamba phambili ekuvikeleni impilo yabathengi ngemikhiqizo yenhlanzeko yomzimba. Omunye wabameleli abavelele balo mbandela umugqa Ijeli yeshawa ye-Lifebuoy.
Ngombono okhuthazayo womphakathi onempilo, i-Lifebuoy iqhubeka nokusungula izinto ezintsha futhi yethula inhlobonhlobo yemikhiqizo yokuhlanzeka yomuntu siqu evela: ijeli yokugeza, ishampoo ukuze isicoci sesandla. Wonke umkhiqizo waziswa kakhulu ngabathengi ngenxa yekhwalithi yawo enhle nenani elithengekayo, elifanele zonke izethameli neminyaka ehlukene. Ngakho-ke, ngokuya komkhiqizo, ungaqiniseka lapho usebenzisa ijeli yokugeza ye-Lifebuoy.
Ingabe ijeli yeshawa ye-Lifebuoy ilungile? Imuphi umphumela?
Akukona nje ukuqondana ukuthi imikhiqizo yomkhiqizo we-Lifebuoy iye yathandwa futhi yafunwa kusukela yavela emakethe. Ngokubuyekeza Ijeli yeshawa ye-Lifebuoy Uma sibheka odokotela besikhumba kanye nabathengi, lolu wuphawu lomhlaba oluhamba phambili lokuhlanza amagciwane.
Ijeli yeshawa ye-Lifebuoy isetshenziswa nefomula ye-ion esiliva ukusiza ukubulala amagciwane, okuyinto enhle. Ngaleyo ndlela kusiza ukuvikela wena nomndeni wakho kuma-ejenti athathelwanayo ayi-10 esikhumbeni.
Enye yezinto ezibangela izithako ezingcono kakhulu ikhishwa emvelweni njengokuthi: I-Lauric acid inenzuzo kakhulu empilweni. Ngesikhathi esifanayo, kusiza ukulwa namagciwane, ukuqeda amabhaktheriya avela esikhumbeni futhi kunciphise ngempumelelo i-folliculitis.
I-sodium hydroxide kujeli yeshawa ye-Lifebuoy inegalelo ekudaleni ifilimu evikelayo enhle kakhulu ebusweni besikhumba. Ngaleyo ndlela kusiza ukunciphisa imiphumela eyingozi evela elangeni noma emithonyeni yemvelo esikhumbeni ngendlela ephelele kakhulu. Ngaphezu kwalokho, i-Titanium Dioxide equkethwe kulo mkhiqizo isiza futhi ekunikezeni umswakama kanye nemisoco ebalulekile ukondla umzimba, ikunikeza isikhumba esinempilo nesithambile njengesengane.
Ngenxa yokuthi yenziwe ngezithako zemvelo, iphephile kakhulu, ilungile futhi ayibangeli noma yimiphi imiphumela emibi emzimbeni. Umkhiqizo uklanyelwe ukuba ulungele zonke izinhlobo zesikhumba, abasebenzisi abaningi abahlukene, ukuze uqiniseke ngokuphelele ukuthi uzowusebenzisa kubathandekayo bakho nomndeni wonke.
Ngokuhlola okuningiliziwe kanye nemiphumela elethwa umkhiqizo, kungabonakala ukuthi ijeli yeshawa ye-Lifebuoy iwumkhiqizo “omuhle ngokwedlulele”. Akukhona nje kuphela ngokuvikela isikhumba okuvelele kodwa futhi inenani elishibhile, ngakho-ke usalindeni, oda ngokushesha umkhiqizo ukuze ukuzwe ngaso leso sikhathi!
Ingabe ijeli yeshawa ye-Lifebuoy imhlophe?
Abathengi abaningi, ikakhulukazi abesifazane, bayazibuza Ijeli yeshawa ye-Lifebuoy isikhumba esimhlophe? Lokhu kulungile ngokuphelele! Nokho, ukusebenza kahle komkhiqizo akuphakeme futhi kudinga ukusetshenziswa isikhathi eside. Nokho, ukusetshenziswa okuyinhloko komkhiqizo ukuvikela nokunakekela isikhumba emiphumeleni eyingozi yendawo yangaphandle.
I-Top 5 okuyijeli yeshawa ye-Lifebuoy enephunga elimnandi namuhla
Ijeli yeshawa ye-Lifebuoy njengamanje iwumugqa womkhiqizo oyintandokazi nodumile ezikhathini zamuva nje. Ngakho-ke yimaphi ama-gels eshawa e-Lifebuoy angcono kakhulu futhi anephunga elimnandi atholakalayo namuhla? Ukubuyekezwa kwe-Phong kuzohlola ngokuningiliziwe izigaba ezi-5 eziphezulu Ijeli yeshawa ye-Lifebuoy Ezidume kakhulu namuhla yilezi:
1. I-Lifebuoy Macha kanye nejeli yeshawa yokususa ubuthi ye-Bitter Melon (850g) yazo zonke izinhlobo zesikhumba
I-Lifebuoy Matcha kanye nejeli yeshawa ye-Bitter Melon okwamanje iwumugqa wamajeli eshawa ahlolwayo ukuze akwazi ukuhlanza nokuvikela isikhumba ngempumelelo. Lona umugqa womkhiqizo owaziwa kakhulu emakethe namuhla.
I-Lifebuoy Matcha kanye ne-Bitter Melon akhiqizwa ngezithako eziyinhloko ezifana nalezi: Amanzi, I-Myristic Acid, I-Glycol Distearate, I-Potassium Hydroxide, I-Glycerin, I-Perfume,… Lezi yizicucu zemvelo, ngakho ziphephe ngokuphelele ukusetshenziswa.
I-Lifebuoy Matcha kanye ne-Bitter Melon Shower Gel iyinhlanganisela ephelele yezithako ezi-2 zemvelo, i-antioxidant Matcha kanye nekhabe elibabayo le-antibacterial, elisiza ukuhlanza isikhumba ngokujulile, ukuvikela isikhumba kumagciwane e-pathogenic kanye nokungcola okubangelwa ukungcola. Ngesikhathi esifanayo, kusiza ukuqeda izimbangela zezinkinga zesikhumba ezifana nokuluma, ubomvu kanye nezinduna ngokuphumelelayo.
Umkhiqizo ukhishwa emvelweni, ngakho-ke ufanelekile kuzo zonke izinhlobo zesikhumba, ngisho nesikhumba esibucayi kakhulu singasisebenzisa.
Intengo yesithenjwa: 177,000 VND / 850g ibhodlela.
2. Ijeli yeshawa ye-Lifebuoy isivikelo esivelele 10+ Ama-Silver Ions (abomvu) esikhumba esizwelayo
Isikhumba esizwelayo sidinga ukulingana phakathi kokuvikela nokunakekelwa. Omunye wamakhandidethi akhanya kakhulu ekuhlanzeni okujulile nokuvikela isikhumba Ijeli yeshawa ye-Lifebuoy Isivikelo esivelele 10+ Ama-Silver Ions. Umkhiqizo uqukethe ukhilimu wobisi kanye ne-oat essence ukuthambisa isikhumba, kanye ne-Active5 ukusiza ukuvikela isikhumba sakho ezinhlotsheni eziyi-10 zamagciwane adala izifo.
Isithako esiyinhloko se-Lifebuoy esinesivikelo esivelele 10+ I-Silver Ions i-essence yobisi emnene, ondla isikhumba kusuka ekujuleni. Yakhiwe ngezithako ze-Silver Ion, umkhiqizo unikeza ikhono lokuhlanza ngokujulile ngaphakathi kwesikhumba, ukuvimbela ngempumelelo amagciwane abangela izifo.
Umkhiqizo unokuthungwa kwekhilimu eqinile, i-foaming enhle, ikakhulukazi ayicasuli isikhumba, ifaneleka kuzo zonke izinhlobo zesikhumba, ngisho nesikhumba esibucayi singasetshenziswa ngaphandle kokucasuka, ukubomvu.
I-Lifebuoy isivikelo esivelele 10+ I-Silver Ion inephunga elithambile, ayinawo amakha, ngakho iphephe kakhulu esikhumbeni.
Intengo yesithenjwa: 165,000 VND/1.1kg ibhodlela.
3. I-Lifebuoy skin care shower gel 850g (blue blue) yazo zonke izinhlobo zesikhumba
Igama elibalulekile ohlwini lwejeli yeshawa engcono kakhulu ye-Lifebuoy ijeli yeshawa eluhlaza okwesibhakabhaka engu-850g. Lena ijeli yokugeza yendabuko ekwazi ukunakekela ngokuphelele nokuvikela isikhumba emiphumeleni yemvelo yangaphandle.
Ijeli yeshawa yokunakekelwa kwesikhumba eluhlaza okwesibhakabhaka i-Lifebuoy ine-essence yobisi njengesithako esiyinhloko. Lesi sithako sifihliwe ngokuphelele emvelweni enekhono lokwandisa umswakama wesikhumba, isikhumba sithambile, futhi singabangeli ukucasuka kwesikhumba uma sisetshenziswa. I-Silver Ion essence equkethwe emkhiqizweni isiza ukuhlanza isikhumba ngokujulile, ukuvikela isikhumba kumabhaktheriya e-pathogenic kanye nokungcola okubangelwa ukungcoliswa kwemvelo.
Ukunakekelwa kwesikhumba esiluhlaza kwe-Lifebuoy kukhishwa ezithakweni zemvelo, ngakho kuphephile futhi kumnene kuzo zonke izinhlobo zesikhumba. Umkhiqizo unokukhanya, iphunga elimnandi, aliqukethe iphunga, ngakho-ke alibangeli ukucasuka, isikhumba esomile ngemva kokusetshenziswa.
Intengo yesithenjwa: 141,000 VND / 1.1kg ibhodlela.
4. I-Detox Lifebuoy Activated Charcoal & Mint Shower Gel (850g) yazo zonke izinhlobo zesikhumba
I-Detox Lifebuoy Activated Charcoal & Mint iwumugqa wamajeli eshawa akhishwe ezithakweni zemvelo ezihlanganisa: Amalahle Acushiwe kanye NeMint ukusiza ukuhlanza, ukuhlanza okujulile, ukuvikela isikhumba kumagciwane kanye nokungcola okubangelwa ukungcoliswa kwemvelo. Lona okwamanje umkhiqizo odumile nodumile emakethe namuhla.
Izithako eziyinhloko ze-Detox Lifebuoy shower gel Activated Charcoal & Mint (850g) zihlanganisa: Amanzi, Potassium Hydroxide, Myristic Acid, Glycol Distearate, Glycerin, Perfume, Menthol… Lezi yizithako ezisebenzayo zemvelo, ezingacasuli. ukucasuka kwesikhumba uma usebenzisa. , ikakhulukazi efanelekayo zonke izinhlobo zesikhumba, ngisho nesikhumba esibucayi kakhulu singasebenzisa.
I-Detox Lifebuoy Activated Charcoal & Mint inikeza ukuhlanza okujulile kwesikhumba, ukuvikela isikhumba kumagciwane e-pathogenic kanye nokungcola okubangelwa ukungcoliswa kwemvelo. Isiza ukuqeda izimbangela zezinkinga zesikhumba ezifana: ukungezwani komzimba, ububomvu, ukulunywa, induna … ngempumelelo.
Umkhiqizo unephunga elipholile, elipholile elifanele zonke izinhlobo zesikhumba.
5. Ijeli ye-Lifebuoy Mint Shower (eluhlaza okwesibhakabhaka) yazo zonke izinhlobo zesikhumba
Ngezinsuku zasehlobo ezishisayo Ijeli yeshawa ye-Lifebuoy I-Bac Ba iyisinqumo esifanele sokusiza umndeni wonke ube nezikhathi eziqabulayo ngokwedlulele. Noma kunjalo i-ion yesiliva ehlanganiswe nezithako ze-mint, umkhiqizo usiza ukuvikela umzimba kumabhaktheriya izikhathi ezingu-10.
Kule gel yokugeza, amakristalu e-mint akhishwe emaqabunga amasha e-mint anekhono lokuhlanza ngokujulile ngaphakathi kwama-pores, avimbele ukuvuvukala kwesikhumba ngokuphumelelayo. Ngaleyo ndlela, kusiza isikhumba ukuba sibe ne-airy, futhi ngesikhathi esifanayo siletha umuzwa opholile oqabulayo, okusiza ukukhulula ukushisa kwehlobo.
Ijeli yeshawa ye-Lifebuoy Mint inokwakheka kwejeli ewugqinsi, enekhono elihle lokukhihliza amagwebu ukusiza ukubulala amagciwane e-pathogenic kanye nokungcola esikhumbeni. Umkhiqizo unephunga elipholile, awunawo amakhemikhali, futhi uphephile ikakhulukazi esikhumbeni, ulungele zonke izinhlobo zesikhumba, ngisho nesikhumba esibucayi kakhulu singasetshenziswa.
Intengo yesithenjwa: 145,000 VND/850g ibhodlela.
Ibiza malini ijeli yeshawa ye-Lifebuoy? Ungathenga kuphi okwangempela?
I-Lifebuoy ihlala iletha amakhasimende imikhiqizo egxile ekunakekeleni nasekuvikeleni impilo yomndeni wonke. Ngakho-ke, inani liyathengeka ngokwedlulele, lifanele iningi labantu. Nokho, intengo yokuthengisa ye Ijeli yeshawa ye-Lifebuoy zizohluka ngohlobo namandla. Ngokulandelayo:
I-Lifebuoy Matcha kanye nejeli yeshawa yekhabe iBitter inenani elithengiswayo cishe: 177,000 VND
I-Lifebuoy Shower Gel Activated Charcoal kanye ne-Mint inenani lokuthengisa cishe: 177,000 VND
Enye ijeli yeshawa ye-Lifebuoy inenani elingaba: 150,000 VND.
Ungathenga ijeli yeshawa ye-Lifebuoy ezindaweni eziningi emakethe, emakhemisi, abathengisi bezimonyo, ezitolo zegrosa… Kodwa-ke, uma unomkhuba wokuthenga ku-inthanethi, kufanele uthenge imikhiqizo kumasayithi okuhweba amakhulu njenge: Shopee. Tiki, Lazada… ukuthola izinqubomgomo zokuphromotha eziningi!
Nazi izinhlobo ezi-5 eziphezulu Ijeli yeshawa ye-Lifebuoy kuhle, kunephunga elimnandi namuhla. Ngethemba, ngalokhu kubuyekezwa okuningiliziwe nokwabelana, kuzokusiza ukuthi ukhethe ijeli yokugeza efanele wena nomndeni wakho! Ufisa ukuthi uhlale unesikhumba esinempilo, esinempilo!
Xem Thêm Top 7 trình duyệt web nhẹ và ít tốn tài nguyên nhất hiện nay | Muasalebang
Các cách làm nha đam không bị đắng giúp ngon hơn một cách đơn giản nhất | Muasalebang